Halkan waxaa ku cusub Hal-abuurnimo Silicon Prairie | Martech Zone
Khamiis, May 6, 2010 Sabti, Sebtember 19, 2015 Ball Lorraine
Waxaan qaatay maalin layaableh anigoo kamid ah garsoorayaasha sanadlaha Mira Awards. In kasta oo aanan kuu sheegi karin cidda guuleysatay (waa inaad ka soo qaybgashaa Abaalmarinta Mira 15-kii May). Waxaan kuu sheegi karaa inay jiraan hal-abuurro aan caadi ahayn oo ka dhacaya halkan Indiana.
Waxaan ahaa garsoore laba qaybood oo Warbaahinta Bulshada ah iyo Shirkad IT ah. Taasi waa kala duwanaansho la yaab leh oo ka soo guureysa ganacsiyada hal-abuurka leh una gudbaya meheradaha cusub ee gudaha aad u dhaqameedururada. Gunaanadkeyga - Hal-abuurnimadu waa meel walba oo ka mid ah Silicon Prairie iyadoo shirkadaha maxalliga ahi ay helayaan habab hal abuur leh oo ay ugu adeegsadaan tikniyoolajiyadda macaamilada, rajooyinka iyo shaqaalaha.
Halkan waxaa ku yaal liiska qayb ka mid ah shirkadaha qabow ee aan fursad u helay inaan la kulmo usbuucii hore:
Anacore - Ku hagaajinta macluumaadka bukaan-socodka alaabtooda Kala-bixinta
Xaqiiqda - Wuxuu sii wadaa inuu helo siyaabo cusub oo loola wadaago macluumaadka macaamiishooda iyo shaqaalahooda iyadoo la adeegsanayo 3sixty shabakadooda bulshada.
Imavex - Fiidiyowgooda cusub ee galka ah waxay ugu gudbin karaan nuxurka si aan kala go 'lahayn qalab kasta oo moobiil ah
Ururka Amaahda Madasha - Waxay u rogtay nidaam CRM gudaha ah iyo shaqo socodsiinta wax ay ka suuq geyn karaan ururada kale ee amaahda, iyagoo u rogay qarash barnaamij busaarad dakhli.
Hill-Rom - U rogo dhaqammada mudada dheer dhamaadka, waxay gebi ahaanba bedeleen hanaankoodii kala shaandheynta iyo u qoondeynta kheyraadka mashaariicda cusub, taasoo keentay in lacagaha lagu jiheeyo barnaamijyada ay noqon doonaan soo noqoshada ugu sareysa marka hore!
Waxaan rajeynayaa inaad igula soo biiri doontid dabaaldega guulaha ay gaareen kuwan iyo kuwa kale oo badan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Indiana ee Abaalmarinta Mira.
Tags: anacoresaxsanururka amaahdabuur-romimavexindianapolisdhulgariir silikoon ahdooxada silica
Fadlan maya no .ma badna Silicon Prairie wax aan micno lahayn !!! Haddaynu nidhaahno, si sax ah u higgaad.
James, waan ka xumahay inaadan jeclayn tixraaca Silicon Prairie. Runtii runtii aad ayaan uga jeclahay markaa Silicoren Vallley. Laakiin thx for note on typo ah. Ma higgaadinkarin karo istaahilaad rogasho, mana fiicna markaan isku dayayo inaan si dhakhso ah u qoro si aan uga baxo uguna raaxeysto qoraxda halkan Silicon Prairie
Imavex runtii wuxuu isu badalay urur weyn. Steve iyo Ryan iyo kooxdu had iyo jeer waxay sameeyeen waxyaabo wax yar ka duwan - sida sameynta fiidiyowyada adeegga macaamiisha ee loogu talagalay macaamiishooda oo lagu dhajiyay dashboard-kooda. Sidoo kale, waxaa loo magacaabay mid ka mid ah shirkadaha ugu mushaharka badan waddanka. Dadweynow halkaa.
Uma maleynayo inay tahay wax aan micno lahayn, James. Waxaan u maleynayaa in Silicon Prairie ama Silicorn Valley midkood uu soo jiito dareenka dadka. Qof kastaa wuxuu la xiriiraa "Silicon" barnaamijka softiweerka ah iyo dadka bannaanka ka jooga Indiana waxay horay u leeyihiin sawir gobolkeenna ah oo ereyadan ay qabanayaan.
“Silicon Valley” ma wax aan micno lahayn baa? Ma yahay "Tufaaxa Weyn"? "Magaalada Dembiga"? "Magaalada Emerald"?
Aad ayey ugafiicantahay "Magaalada Circle" ama "Naptown"! Adeegsiga erey qosol badan, laakiin mahadnaq ah sidan oo kale waxay noqon kartaa waxa aan u baahanahay si aan u helno dareenka dadka.